★ Ukukhuthaza ★
Uluhlu loTshintsho oluPhezulu
Iinkonzo zeNtengiso ze-ICO
Iinkonzo zoLuhlu loTshintsho lweCrypto
UPhicotho lweKhontrakthi ehlakaniphile
Binance Smart Chain Ngokusekelwe ICOs
Yazi uMthengi wakho (KYC)
UKai Ken inu yindawo eqhutywa luluntu, ithokheni yeDeFi. Kwintengiso nganye, imisebenzi emithathu elula iyenzeka: Ukutsha, ukufunyanwa kwe-LP, kunye nokukhula koPhuculo. Ngale modeli yethokheni, iprojekthi iyaxhamla iyonke ngentengiselwano enye. Intengiselwano Kai ken zixhamla BONKE abanini.
Kaiken Inu Uphawu
Lo mqondiso ujolise ekunikeni umvuzo kubanini bawo kwaye wohlwaye abathengisi. Kuzo zonke izinto ezenziwayo, kusetyenziswa ezi rhafu zilandelayo:
Xa umtyali-mali ethenga umqondiso ngexesha lokuThengisa uLuntu:
I-1% iya kwintengiso yesipaji
I-1% iya kwi-LP
I-1% iya kutshisa idilesi yewallet
I-2% iya kubanini
Xa umtyali-mali ethengisa umqondiso ngexesha lokuThengisa uLuntu:
I-2% ukuya kwi-7% iya kubanini ngokuxhomekeke kwi-Eth elingana nayo yonke ithengise umthengisi. Ikhontrakthi iya kumisela i-Eth efanayo kwaye isuse i-% eya kubanini.
I-2% ukuya kwi-7% eya kubanini kuyo yonke intengiselwano yokuthengisa yinto ekungekho mntu uyenzileyo. Eli nqaku lilodwa kwaye liqala ukubonwa kulo mqondiso.
Iimpawu kunye nohlaziyo lwexesha elizayo:
Ifama yeZinja. Oku kuyakuba lichibi lokulima le-LP. I-Kaiken INU inokudityaniswa ne-Eth, i-USDT kunye nezinye iingqekembe ezinzileyo ukuze kulinywe ngakumbi i-Kaiken INU. I-Kaiken INU iya kudibana nezinye iithokheni zokulandela.
Indlu yeZinja. Inja yeNdlu iya kuba ngomnye umqondiso wokuba xa udityaniswe neKaiken Inu kwiFama yeZinja, iya kuwaphinda kabini amandla okulandela.
Iintsana zeCrypto. Lo iya kuba ngomnye umqondiso onokufunyanwa ngokulandela i-Kaiken INU kunye nezinye iithokheni. Ezi njana ze-crypto ziya kuba zii-NFTs ezinokuthengiswa
Ukutya kwenja. Oku kuyakuthengwa ukondla ii-Crypto Puppies ukuze zikhule ngokukhawuleza.
Iivithamini zenja. Oku kuya kuba ngomnye umqondiso oya kuthi ubonelele ngesondlo kwiintsana ze-crypto.
Inkqubo ye-KAI Eco. Le iya kuba sisicelo esisemthethweni esisemthethweni seprojekthi yeKaiken Inu.
Intengiso yabucala kwi-7 yeedola yethokheni.
Ukuthengiswa kwangaphambili kwi-10 yeedola kwithokheni nganye nge-dxsale.
Ukuthengiswa koLuntu kwi-12 yeedola ithokheni nganye
% Ulwabiwo. Oku kusebenza kuphela xa kuthengiswa esidlangalaleni, hayi ukuthengiswa kwangaphambi kokuthengiswa kunye nokuthengiswa kwangasese.
Injongo yethu kukufumana i-Kishu kunye ne-Shib Inu ngokubhekiselele kubanini kunye nokuthengiswa kweemarike. Senza amanyathelo amancinci.
Imephu yeNdlela ye-ICO
2021 Q3 1. Ukuthabatha okokuqala
• Ukuthunyelwa kwesivumelwano
• Ukudalwa kweAkhawunti yeendaba zeNtlalo
• Intengiso yabucala
• Ukuthengiswa kwangaphambili koluntu
• Isicelo seCMC
Uphuhliso lwe-Kai Eco Wallet
• I-CEX (uluhlu lwe-1-3)
• Uphuhliso lweFama yeeNja
2021 Umbuzo wesi-4
Ukuthunyelwa kweFama yeeNja
Uluhlu lwe-CEX (uluhlu olu-1-2)
• Intengiso yeMpembelelo zeMithombo yeendaba kuLuntu
• Ukuthunyelwa kweNdlu yeeNja
• Hlaziya iKai Eco Wallet
• Uphuhliso lweeNtsana zeCrypto
• Uphuhliso lweeVithamini zeZinja
• Ukuphuhliswa kokutya kwezinja
Uluhlu lwe-CEX (1 kwi-5 ephezulu)
• Hlaziya iKai Wallet
2022 Q2 4. Indibano
Beka zonke iziqwenga kwiindawo zazo ezifanelekileyo kwaye uqalise ukwakha i-KAI ecosystem.
Intengiso yabucala ye-ICO
Ngaba ufuna ukudwelisa i-ICO yakho?
Dwelisa i-ICO yakho namhlanje kwiwebhusayithi yethu kwaye sifikelela amawaka abatyali mali kwihlabathi liphela kwaye, ngoku sibonelela ngokukhawuleza Inkonzo ye-KYC ye-ICO. Gcwalisa ifom yethu yokunxibelelana namhlanje kwaye siya kuqhagamshelana nawe kwiiyure ezingama-24 ezizayo.
I-imeyile yenkxaso ngokubanzi:
Uluhlu lwe-imeyile ye-ICO:
Inkxaso yeNcoko yeTelegram:
Nceda ushiye le nto ingenanto
Kakhulu! Jonga ibhokisi yakho ukuze uqinisekise umrhumo wakho.
Uluhlu lwe-ICO kwi-Intanethi lizimeleyo ireyithingi ye-ICO kunye neqonga lodweliso kunye noluntu lwe-blockchain olunabasebenzisi abanda mihla le.
Zive ukhululekile ukunxibelelana nathi ngencoko ebukhoma okanye ngetelegram ukuba ufuna ukudwelisa i-ICO yakho okanye ufuna iiNkonzo zeNtengiso ze-ICO.
Copyright © 2022 Uluhlu lwe-ICO kwi-Intanethi. Onke Amalungelo Agciniwe.
Ngaba ufuna ukunyuswa kwe-Ico?
Jonga iinkonzo zethu